ချစ်သူမောင်: ထိချင်ရာထိ နဖူးထိပြီးဟက်တက်ကွဲလည်းကောင်းတာပဲဆို.......
မပြောမပြီးမတီးမမြည်ဆိုတော့လည်းပြောသင့်တာပြောချင်တယ် တစ်ကယ်တော့ ချတ်ဘောက်ဆိုတာ google talk ကနေစပြီး အွန်လိုင်းမှာယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်အနေနဲ့ရှိလာခဲ့တယဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမကတော့ပါဘူး အနည်းဆုံးဆယ့်ငါးနှစ်နီးပါးထွန်းကားလာခဲ့တဲ့ချတ်ဘောက်ယဉ်ကျေးမှုပေါ့.....
တစ်ချိန်က google talk မပေါ်သေးခင်မှာအွန်လိုင်းမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ကြဖို့ထက် နိုင်ငံခြားသားတွေကအများသားလေ ။ Person.com ကနေပဲစပြီးပြောရမှာပေါ့ အာ့ခေတ်က ဆိုရှယ်နက်ဝဒ်ဆိုတာ ခုလိုဖေ့ဘုတ်ကြီးမထွန်းကားခင်မှာ Person.com သုံးကြတယ် မြန်မာလူမျိုး(profile ဝင်ကြည့်လို့)လို့သိခဲ့ယင်ကိုယ်က သိချင်တယ်ခင်ချင်တယ်ဆိုယင် PM ကနေတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ရပါတယ် Hello ကစပြီး khin chin lo ... အာ့လိုစကားလုံးတွေနဲ့စပြီးသူငယ်ချင်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုအောင်အပြန်အလှန်ပို့ကြရတယ် ။ တခါတရံဆိုယင် သုံးလေးငါးရက်ကြာတတ်ပါတယ် ၊ အာ့ခေတ်ကအခြေနေတခုကိုပြောပြတာပါ အဲဒီခေတ်က အင်တာနက်မှာ အင်မတန်ယဉ်ကျေးကြပါတယ် (mirc ဆဲနေတာ)လွဲလို့ပေါ့။
ထားပါ ခုပြောချင်တာတချိန်ကခက်ခက်ခဲခဲ message ပို့ခဲ့ကြပေမယ့်ယဉ်ကျေးကြတယ် ၊မောင်နဲ့နှမ စာနာကြတယ် ။
Google talk ခေတ်ရောက်တဲ့အထိလည်းဆက်လက်ပြီးယဉ်ကျေးခဲ့ကြတယ် အဲဒီအချိန်ကစပြီး ခင်မင်ခဲ့ကြတဲ့အွန်လိုင်းသူငယ်ချင်းတစ်ချို့လည်း ခုချိန်ထိရှိနေကြတုန်းခင်နေကြတုန်းပါ၊ အဲဒီအချိန်က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုအရှိဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။
ခုခေတ် ဖေ့ဘုတ်ဆိုတာ ဗိုင်ဘာဆိုတာ သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်မှုနှုန်းအင်မတန်မြန်ပါတယ်၊ ကျနော့အမြင်ကတော့လူတွေလည်းတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လေးစားသမှုလျော့ကျလာတယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ဥပမာကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးပြီးဝါစဉ်အရ လည်းကြီးတဲ့သူအပေါ်တောင်မက်ဆေ့ပို့တဲ့ လေယူလေသိမ်း တွေကဆရာလုပ်နေသလိုလို။ တချို့ကြပြန်တော့လည်း ငယ်ငယ်ကသူငယ်ချင်း ရည်းစားမဖြစ်တဖြစ် ကွဲကွာသွားကြတာနှစ်သုံးဆယ် ကြာပြီးပြန်တွေ့ကြတော့သူငယ်ချင်းအဖြစ်ခင်မင်မှုကတော့မပြောင်းလဲပါဘူး သူလည်းအိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးတွေဘာတွေရနေတဲ့အပြင် တစ်ဖက် မိန်းကလေးကအိမ်ထောင်ကျ ကလေးတစ်ယောက်မွေးပြီး လင်ယောက်ကျားသေဆုံးသွားလို့ တစ်ယောက်တည်းမာန်တင်းပြီးရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတာ အာ့တာကိုအခွင့်ကောင်းယူတာလားဘာလားတော့မသိ သူ့ဝေါပေါ်မှာတောင်မshare ထားတဲ့ သတင်းမျိုး(ဥပမာ-sex page link လိုမျိုး၊နောက်တမျိုး အမျိုးသားခါးအောက်ပိုင်းနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ Video မျိုး)ကိုချတ်ဘောက်မဟုတ်ပဲ viber ကနေပို့တာ အာ့တာကတမင်သက်သက်ဘာသဘောဆိုတာ
ထိုနည်းတူစွာပေါ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်လှတပတတွေ့ယင်အကောင့်အတင်းလိုက် add
ပြီး မက်ဆင်ဂျာကနေ Hi Hi ......အစရှိသလိုမျိုး တစ်ဖက်ကပြောချင်တာ ဘာမှန်းမသိ အသက်အရွယ်ကိုမကြည့် (တချို့ကအသက်အမှန်မတင်တာလည်းပါသလို)ဖုန်းဘေလ် ငါးထောင်လောက်နဲ့ sexy chat နေကြတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေကိုလည်းပြောချင်ပါသေးတယ် ၊ အမျိုးကောင်းသား မ.......များ လည်း မိန်းမအကောင့်မြင်တိုင်း sex chat တယ်ထင်မနေပါနဲ့လို့ အမျိုးကောင်းသမီးတွေအွန်လိုင်းမှာအများကြီးရှိနေသလို အမျိုးကောင်းသားတွေလည်း အွန်လိုင်းမှာအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့
အွန်လိုင်းယဉ်ကျေးမှုဟာအမျိုးသာယဉ်ကျေးမှုနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက် ကိုယ့်အနာဂါတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမယ့်အမျိုးကောင်းသား/သမီးတွေအားလုံးအချိန်မှီကိုယ့်စိတ်လေးတွေ ဆန္ဒကိုသိက္ခာနဲ့ထိန်းပြီးပြင်ဆင်သင့်ပါကြောင်းအကြံပေးလိုက်ပါရစေ။
စာရေးသူ ချစ်သူမောင် at 4:27 PM
သည်လိုခေါင်းစဉ်တပ်လျှင် ချက်ချင်း facebook တည်းဟူသော လူမှုကွန်ယက်ကြီးကိုပြေးမြင်မိမှာ အသေချာဖြစ်သည် ။တကယ်တော့ အယင့်အယင်တည်းကရှိခဲ့ေ...
အပျော်သဘောလျှောက် တွေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည် တခါတရံမှာခေတ်တခေတ်ကို သတိရမိနေခဲ့တယ် CNG ကားတွေတန်းစီ နေတာကို တွေ့မိလိုက်လို့ပါ. . . . . .မှတ်မှတ်ရရ...
ဒီတစ်ညတော့ လွမ်းခွင့်ပြုပါ ရင်ကချစ်တဲ့ မောင့်သခင်ရေ..... ခင်ရေ...သက်ထား အဝေးကို ခဏသွားတော့ မောင် နေမရ.... တစ်ကယ်ဆို စက္ကန့်ေ...
chitthumaung by www.chitthumaung.com is licensed underaCreative Commons Attribution 3.0 United States License.
Based onawork at www.chitthumaung.blogspot.com.